ထောင်တွင်း လူကျပ်နေမှု ဖြေရှင်းရေး အကြံပြုစာတမ်း AAPP မကြာမီ ထုတ်ပြန်မည် - Yangon Media Group
ထောင်တွင်း လူကျပ်နေမှု ဖြေရှင်းရေး အကြံပြုစာတမ်း AAPP မကြာမီ ထုတ်ပြန်မည်
အကျဉ်းထောင်များအတွင်း လူကျပ် နေမှုကိုဖြေရှင်းနိုင်ရေးအတွက် အချက်များစွာပါဝင်သော အကြံ ပြုစာတမ်းကို မကြာမီထုတ်ပြန်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများကူညီစောင့် ရှောက်ရေးအသင်း (AAPP)မှ ဦးအောင်မျိုးကျော်ကပြောသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ အကျဉ်းထောင်များအတွင်း ဝင်ဆံ့ဦး ရေထက် နှစ်ဆများပြားလျက်ရှိရာ အကျဉ်းထောင်စနစ်ကြီးတစ်ခုလုံးကို ပြုပြင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။
”လက်ရှိအကျဉ်းထောင်ရဲ့ စနစ်ကြီးတစ်ခုလုံးကို ပြုပြင် ပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်။ အကျဉ်း ထောင်သည် တကယ်ကိုပြုပြင် ပြောင်းလဲရေး စခန်းတစ်ခုဖြစ်သင့်တယ်”ဟု ၎င်းကဒီမိုကရေစီတူ ဒေးသို့ ပြောသည်။ အကျဉ်းထောင်များအတွင်း လူကျပ်တည်းမှုမှာ ယခင်ကတည်း မှစ၍ ယခုအချိန်ထိရှိနေသော်လည်း ထောင်တွင်းညှဉ်းပန်းနှိပ် စက်မှုမှာမူများစွာလျော့ကျသွား ကြောင်း၊ သို့သော်လည်း လုံးဝကင်း ရှင်းသွားခြင်းမျိုးမဟုတ်သေး ကြောင်း ၎င်းကဆက်လက်ပြောသည်။ ထောင်များထပ်မံတည် ဆောက်ခြင်းမှာ ရေတိုဖြေရှင်း နည်းသာဖြစ်ပြီး အကျဉ်းထောင်ကျပ်တည်းမှုကို ဖြေရှင်းနည်းအ စစ်အမှန်မဟုတ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
AAPP မှ ပြုစုလျက်ရှိသည့် အကြံပြုစာတမ်းတွင် နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ကာ အကြံ ပြုချက်များစွာပါဝင်မည်ဖြစ်ပြီး လက်ရှိအချိန်တွင် အချောသတ်ရန် သာ ကျန်ရှိတော့ကြောင်း ဦးအောင် မျိုးကျော်ကပြောသည်။ ယင်းအပြင် အကျဉ်းထောင်နှင့်ထောင်သားမမျှတသည့် ကိစ္စမှာ ယခုမှမဟုတ်ဘဲ ယခင်စစ်အစိုးရလက်ထက်ကတည်းက ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကပြောသည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ အကျဉ်းထောင်များတွင် ဝင်ဆံ့ဦးရေထက် ထက်ဝက်ခန့် ပို မိုများပြားနေကြောင်း မြန်မာ နိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးကော်မ ရှင်ကလည်း ပြောကြားထားသည်။
အကျဉ်းထောင်များတွင် ပြစ်ဒဏ်ကျခံနေရသူများအနက် ရာခိုင်နှုန်းအများစုမှာ မူးယစ် ဆေးဝါးအမှု ဖြစ်ပြီး ယင်းအနက် မူးယစ်ဆေးဝါးအနည်းငယ်ဖမ်းမိရုံဖြင့် ကျခံနေရသူအများဆုံးဖြစ် ကြောင်း၊ ၎င်းတို့ကို လူမှုရေး ပြစ် ဒဏ်သို့ လျှော့ပေါ့ပေးခြင်းအား ဖြင့် အကျဉ်းထောင်အကျပ်အတည်းကို တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြေ ရှင်းနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းအ ပြင် လူသားမဆန်သည့် ပြစ်မှု ပြစ်ဒဏ်မဟုတ်ဘဲ သာမန်မတော်တဆမှုများဖြင့် အကျဉ်းကျခံနေရသည့် သက်ကြီးရွယ်အိုများကိုလည်း ပြစ်ဒဏ်မှ ပယ်ဖျက်ပေးသင့်ကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။ အကျဉ်းဦးစီးဌာနကို Correction Department ဟု ခေါ်ဆိုသည့်အတိုင်း အကျဉ်းသားများအတွက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးပြုလုပ်ပေးသည့်နေရာ ဖြစ်သင့်ကြောင်း၊ အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းပညာသင်ကြားပေးခြင်း၊ အတန်းပညာတက်ရောက်ခွင့်ပေး ခြင်းများကို ပိုမိုဆောင်ရွက်သင့် ကြောင်း ဦးအောင်မျိုးကျော်က ပြောသည်။
အကျဉ်းထောင်တွင်းလူကျပ်မှုကို လျှော့ချနိုင်ရေးအတွက် တရားစီရင်ရေးအပိုင်းကိုလည်း ယခုထက်ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း၊ လက်ရှိအချိန်တွင် အချုပ်ဖြင့် နှစ်ရှည်တရားရင်ဆိုင်နေရသည့်သူများသည်လည်း အကျဉ်းထောင်များအတွင်းများစွာရှိနေရာ တရားစီရင်ရေး ကဏ္ဍအနေဖြင့် မြန်မြန်ဆန်ဆန် ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။ မကြာမီထုတ်ပြန်မည့် အ ကြံပြုစာတမ်းတွင် အထက်ပါအ ကြံပြုချက်များအပြင် အခြားအချက်များလည်း ပါဝင်မည်ဖြစ်ပြီး အစိုးရ၊ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန နှင့်လွှတ်တော်အသီးသီးသို့လည်း ပေးပို့သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကဆက်လက်ပြောသည်။
အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ဥပဒေပြုအာဏာ အပ်နှင်းခံထားရသူ ဒီချုပ်အဖွဲ့ဝင်များ ပါတီအပေါ် ထိခိုက်လာမည်?
မြိုင်ကြီးငူဆရာတော်၏ ရုပ်ကလာပ်တော်ကို ထိုင်းမှမြဝတီသို့ ပြန်လည်ပင့်ဆောင်၊ ရုပ်ကလာပ်တော်??
သမ္မတနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရုပ်ပုံပါ ပိုစတာဖြင့် တာမွေတွင် ဒီချုပ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း မဲ
မြန်မာသတင်းမီဒီယာ စာတမ်းဖတ်ပွဲတွင် နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွေ ရပ်နားဖို့ ၊ ဖျက်သိမ်းဖို့ လုံး
ဗင်နော့တူနိုင်ငံတွင် မီးတောင်တစ်လုံး ပေါက်ကွဲရန် လှုပ်ရှားနေ